Iindaba - Ngaba inkqubo yakho yemoto ikrelekrele? Kububulumko ngokwenene ukuba unomsebenzi onjalo, kuxhomekeke ekubeni uyahlangabezana nomgangatho
Ngokuphuculwa komgangatho wobomi babantu, iimfuno zeemoto ziya zisonyuka. Lonke ulungiselelo kwimoto kufuneka luhlangabeze iimfuno zabo. Okuphambili kuya kunikwa loluphi uphawu lweemodeli, ezinje ngobungakanani beewindows kunye nokusetyenziswa kwendawo yokugcina. Kukwakho nendawo entle, eyona nto ibalulekileyo luluhlu oluphambili lwengqondo kunye nolunye uhlengahlengiso olwahlukeneyo, enye ibalulekile. Ngokukodwa kuphuhliso lobuchwephesha, inkqubo yomatshini weemoto iye yaba yifowuni yesibini esetyenziswa ngabantu rhoqo. Kuya kufuneka ivulwe kwangoko xa ungena emotweni.
Ukuphuhliswa kwenkqubo yomatshini wemoto
Ukubuyela emva kwixesha elidlulileyo, inkqubo yokuqala yomatshini wemoto yaphuhliswa ngo-1910 ngaphezulu kweminyaka eli-100 eyadlulayo. Kuthathe ngaphezulu kweminyaka engama-20 ukwenza imisebenzi yesiqhelo yanamhlanje enje ngeefowuni, iBluetooth, iteyiphu, iDVD, kunye nokuhambahamba. Nangona ukukhula kolwazi olukrelekrele kukhawuleza ngokukhawuleza, singasathethi ke, ukukhula kweenkqubo zomatshini wemoto kuhamba kancinci.
Umzekelo, iApple iphuhlise kwaye ithengise i-touch-screen yokuqala ye-Apple ngefowuni ngo-2007, kodwa bekungekho ngo-2012 apho inkqubo yomatshini wemoto yaqonda ukusebenza kwebala. Kude kube ngoku, ezinye iinkqubo zomatshini wemoto kufuneka zixhomekeke ekusebenzeni kwamaqhosha omzimba. , Cinga ngayo kakhulu, besikude nexesha leefowuni ezinamaqhosha, kubonakala ngathi ixesha lidlulile, kodwa iimoto zanamhlanje azinakwahluka ekusebenzeni kwamaqhosha.
INQWELO-MAFUTHA YENQWELO-MAFUTHA NE-NAVI YE-AUDI A4, Q5 YOKUFUNDA ABADLALI ABANINZI NGEENKCUKACHA
I-n-car Inkqubo yoLonwabo lweaudio ngeBluetooth kunye noNxibelelwano lwe-USB
Ne I-DMH-G220BT Inkqubo yokuZonwabisa ngemoto ngaphakathi emotweni wonwabele yonke imixholo oyithandayo kwiscreen esikhulu esingu-6.2 ”Cacisa udidi lweResistive Multi-touchscreen. Uvulindlela I-DMH-G220BT ikuvumela inkululeko yokuthatha umculo wakho kunye nengqokelela yevidiyo uhambe nayo endleleni. Nokuba igcinwe kwisixhobo esigciniweyo se-USB okanye kwi-smartphone yakho yamva nje I-DMH-G220BT idlala iifayile zeaudiyo / zevidiyo kwiifomathi ezahlukeneyo kubandakanya iMP3, iDivX, iMPEG4 kunye neWMA.
Ukongeza, oku kuguquguqukayo kwinkqubo yemoto ye-AV yolwakhiwo kunxibelelaniso lweBluetooth. Ukuvumela ukuba usasaze umculo wakho okanye ubize izandla-ngaphandle koqhagamshelo olungenazingcingo. Uvulindlela I-DMH-G220BT ikwafaka negalelo lekhamera, ke unokuncamathisela ikhamera ye-veiw yangasemva ukunceda ukuguqula indlela ngokulula